Rọshịa 2018: Ihe ise ị maghị maka otu egwu bọọlụ mba Aịsland - BBC News Ìgbò
Rọshịa 2018: Ihe ise ị maghị maka otu egwu bọọlụ mba Aịsland
22 Juun 2018
Ọtụtụ ndị mmadụ ajụọla ndị bụ ndị Aịsland a jidere mba Ajentina n'ọrụ ha ji gbaa onwe ha onye laba onye laba n'asọmpi Iko Mbaụwa na-eme ugbua.
Mba ahụ nọ n'otu D ga-agba Naịjirịa taa mana ha kparịrị Ịnglandị gbaa ha ọkpụ goolụ abụọ a satara naanị otu na asọmpi Yuro afọ 2016.
Aịsland bụ nwantịtị obodo na-erughi ka otu steeti na Naịjirịa mana ha na-akpa ike dị egwu.
Lee ihe 5 ị na-amaghị gbasara mba ahụ na otu egwu bọọlụ ha:
1. Ọnụọgụgụ mba Aịsland niile erughi ọnụọgụgụ ndị nọ n'Enugwu: Mba Aịsland dị naanị mmadụ 334,252 ebe Enugwu dị nde mmadụ 3.2
2. Onye nkuzi ha bụ dọkịnta eze ebe mmadụ asatọ n'ime otu egwu bọọlụ ha bụkwa dọkịnta
Kedụ ka dọkịnta eze si enye ọtụtụ mba siri ike n'egwuregwu bọọlụ nsogbu niile a? Ihe a bụ ọgbara Igbo gharị maka na onye nkuzi ha abụghịdị onye nkuzi bọọlụ oge niile.
Hiemir Hallgrimsson na-arụ dxịka dọkịnta eze ma na-akụzikwara ha egwu bọọlụ. Ọ natara ọrụ ya n'aka Lars Lagerback bụ onye Sweden bụkwara onye nkuzi otu egwu bọọlụ Naịjirịa bụ Super Eagles.
Ndị nọkwa n'otu egwu bọọlụ ha na-arụkwa ọrụ ọzọ gụnyere ịgba bọọlụ.
3. Onye na-echere ha goolu na-emebu ihe onyonyo
Nkenke aha onyonyo Ụdị ihuigwe a abụghị ebe a ga-agba bọọlụ n'iro
Hannes Halldorsson na-emebu ihe onyonyo tupu o tinye uchu n'ịgba bọọlụ dịka ọrụ ya. O mere ihe onyonyo egwu n'afọ 2012.
4. Ha na-agba bọọlụ n'ime ụlọ
Nkenke aha onyonyo Ama egwuregwu ebe e tinyere ọkụ ka ha na-asọmpi afọ niile
Oyi dị egwu na-atụ na Aịsland dịka aha ha si dị, ọzọkwa bụ na ọ na-agbakarị ọchịchị na mba Aịsland, n'ọnwa Disemba, e nwereike inwe ọchịchị rue elekere iri abụọ na mba ahụ. Nke ahụ anaghị enye aka ikuzi maọbụ ịmụ ịgba bọọlụ, ya mere ha jiri tinye ego rụọ ama egwuregwu bọọlụ n'ime ụlọ. Ha nwere ama egwuregwu 30 ebe asaa n'ime ha nọ n'ime ụlọ ma pee mpe karịa ama egwuregwu e ji agba bọọlụ.
5. Nke a bụ mbụ ha na-abịa asọmpi Iko Mbaụwa: Aịslandị tozuru ịga asọmpi siriike na mba ụwa nke mbụ n'afọ 2015 oge ha pụtara n'asọmpi Euro 2016 ebe ha meriri mba Netherlands ma merikwa mba Ịngland tupu Frans agbapụ ha n'agba anọ ikpeazụ. Ha tozuru ịbịa asọmpi Iko Mbaụwa 2018 dịka ha meriri Kosovo ọkụ goolụ abụọ n'afọ 2017 we bụrụ mba pekarịchara mpe na mmadụ gara asọmpi ahụ.
Ha na Naịjjịrịa ga-asọmpi taa dịka ha na Ajentina gbara onwe ha onye laba onye laba, egwu na-atụ ndị mmadụ na ha nwereike imeri Naịjirịa maka na dịka otu onye siri kwuo, ha anaghị agba maka ego, ha na-agba maka obodo ha.
Ọka ibe n'egwu bọọlụ Afirịka n'afọ
World Cup 2018: Ihe ndị Super Eagles mere ka ndị Kroeshia merichara ha
20 Juun 2018
Osibanjo gara Kastina maka ide mmiri
E mere ngaghari iwe megide ịchụtu osote Rochas
Charly Boy ekwuola na nwa ya nwaanyị na-ayị nwaanyị ibe ya nwere ike ime ihe masịrị ya